Nhau - Maitiro ekuita kana iyo kiyi yemotokari kurasikirwa?
Bata kugadzira chiteshi
Gadzira Kiyi nyowani
Kana iwe ukasarudza kushongedza chiteshi chekugadzirisa nekiyi nyowani, saka unofanirwa kupa mota uye ID yemuridzi. Zvinoenderana nemamodheru akasiyana, chiteshi chekugadzirisa chinoda kuti muridzi wacho ape password-yekumisikidza yekuba kiyi-manhamba gumi nemanomwe. Iri password haisi nhamba yezino, asi password yakapihwa muridzi kana uchitenga mota nyowani. Kune mamwe mamodheru, chiteshi chekuchengetedza chinopa iye anogadzira mota chitupa chemotokari uye muridzi. Mugadziri anobvunza password yekudzivirira kuba yekiyi yekumisikidza kuburikidza nedhatabhesi uye anoitumira fax kunzvimbo yekuchengetedza.
Mushure mekuwana password iyi, chiteshi chekugadzirisa chinoda kuti muridzi ape kiyi nhamba yezino kuti agadzire kiyi yesimbi. Kana pasina iyo nhamba yezino rezino, unogona kubvunza nhamba yezino rezino kuburikidza nedhatabhesi. Panguva imwecheteyo, chiteshi chekugadzirisa chinogona kugadzirisa ari mukati mekomputa parameter kuti iise kiyi yemotokari yakarasika sekiyi isiri pamutemo, asi chete kana mota isingatange kumutswa, uye kiyi yakarasika inogona kuvhura musuwo. varidzi: kana kiyi yemotokari yaonekwa kuti yarasika, kunyangwe kana kiyi nyowani yakagadzirirwa, iwe unofanirwa kungwarira kuti usachengetera zvakakosha mumotokari.
Ndokumbirawo kutsiva iyo yekuvhara mota yakanangana panzvimbo yekugadzirisaSezvo pachine njodzi yekurasikirwa nezviri mumota kana uchichinja kiyi, kushandura kiyi kunopedza njodzi iyi zvachose. Nekudaro, mutengo wekushandura kiyi wakakura zvakanyanya kupfuura iyo nyowani kiyi. Zvichienderana nemhando dzakasiyana nemota, Iko kukiya kunosiyana. Mimwe mienzaniso inoshandisa iyo imwechete kiyi pamusuwo, mukova wembageji, gonhi regonhi remukati uye chivharo chetangi peturu. Panguva ino, kana iro rakakiiwa rese remotokari rakatsiviwa, makiyi anoda kuchinjwa anoenzaniswa.
Kazhinji kutaura, mutengo wakazara wekiyi nyowani unosiyana kubva pa300 yuan kusvika pa2,000 yuan, asi mutengo wekumisazve kiyi yemotokari ingave ka4 kana ka5 iyo yekutsiva kiyi, uye iyo kiyi yekutsiva inowanzo iriwo Izvo hazvisi mukati me kukura kwezvinotaurwa nekambani yeinishuwarenzi, saka mutengo wakakwira.
Kazhinji kutaura, kiyi nyowani inogona kuve yakashongedzwa mumaawa mashoma, asi mamwe emhando yepamusoro emhando yepamusoro anoda nguva yakawanda, nekuti dzimwe mota dzinotumirwa kumusoro-dzinoda kupedzisa kuita kwekukanda nekurasa kiyi yekutanga panzvimbo yekugadzira. Yakakwira-magumo mota ine yakakwira nhanho yekuparadzira password uye kuenzanisa uye yakakwira mitengo.
Post nguva: Aug-17-2020